Nin saaxiibtiis dilay ka dibna hilibkeeda cunay | Somaliska
Nin Swedish ayaa maxkamada xukuntay shalay ka dib markii uu dilay saaxiibtiis ka [caption id="attachment_1815" align="alignright" width="300" caption="Kamuunka Skara"] [/caption] dibna uu hilibkeeda cunay magaalada Skara. Ninkaan oo 32 jir ah ayaa saaxiibtiis oo 40 jir ahayd qoorta ka jaray ka dibna cad cad u jaray asagoo hilibkeeda karsaday oo cunay. Ninkaan ayaa hada lagu neynaasaa "Dadqalka Skara" oo ah goobta uu falka ka geystay. Maxkamada Skövde ayaa ku xukuntay ninkaan in la geeyo maanakoobiyo meesha dadka waalan lagu haayo iyo ganaax dhan 75,000 KR. Ninkaan ayaa qirtay dhibaatada uu geystay asagoo booliska soo wacay ka dib markii uu saaxiibtiis dilay. "Waan xasuustaa sidaan qoorteeda u jaray, ka dibna intaan jikada galay aan bilaabay in aan kariyo" ayuu u sheegay maxkamada. Maalinta uu dilay saaxiibtiis isaga iyo iyada ayaa suuqa ka soo adeegtay ayadoo sariirka ku seexatay ka dib ayuu midi la kor yimid midi asagoo qoorta ka jaray ka dibna cad cad u jaray. Ninkaan ayaa maxkamadu ku macnaysay nin waalan asagoo sheegay in uusan ka xumeyn falka uu geystay balse intaas ku daray in uu jeclaa saaxiibtiis oo mustaqbal ay qorsheynayeen.
Nin Swedish ayaa maxkamada xukuntay shalay ka dib markii uu dilay saaxiibtiis ka
dibna uu hilibkeeda cunay magaalada Skara. Ninkaan oo 32 jir ah ayaa saaxiibtiis oo 40 jir ahayd qoorta ka jaray ka dibna cad cad u jaray asagoo hilibkeeda karsaday oo cunay. Ninkaan ayaa hada lagu neynaasaa “Dadqalka Skara” oo ah goobta uu falka ka geystay.
Maxkamada Skövde ayaa ku xukuntay ninkaan in la geeyo maanakoobiyo meesha dadka waalan lagu haayo iyo ganaax dhan 75,000 KR. Ninkaan ayaa qirtay dhibaatada uu geystay asagoo booliska soo wacay ka dib markii uu saaxiibtiis dilay.
“Waan xasuustaa sidaan qoorteeda u jaray, ka dibna intaan jikada galay aan bilaabay in aan kariyo” ayuu u sheegay maxkamada. Maalinta uu dilay saaxiibtiis isaga iyo iyada ayaa suuqa ka soo adeegtay ayadoo sariirka ku seexatay ka dib ayuu midi la kor yimid midi asagoo qoorta ka jaray ka dibna cad cad u jaray.
Ninkaan ayaa maxkamadu ku macnaysay nin waalan asagoo sheegay in uusan ka xumeyn falka uu geystay balse intaas ku daray in uu jeclaa saaxiibtiis oo mustaqbal ay qorsheynayeen.
Nuradiin Farah: Soomaalidu waxay iga codsadeen in aanan ku hor ceebayn Swedishka